Ny taona 2019 dia taona nanenenan'ireo trano fandraisam-bahiny Atsinanana sy Afrika Avaratra
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny taona 2019 dia taona nanenenan'ireo trano fandraisam-bahiny Atsinanana sy Afrika Avaratra
Taona sarotra ho an'ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra nifarana tamim-pamindram-po ny hotely tamin'ny volana desambra, volana iray izay tsy nanampy ny valiny isan-taona. Ny tombom-barotra isaky ny efitrano misy dia nihena 5.4% isan-taona, nampisy fihenan-danja 9.3% YOY GOPPAR ankapobeny tamin'ny taona, araka ny angona farany.
Ny tombom-barotra dia nosakanan'ny tsipika ambony malemy izay nahita ny RevPAR nilatsaka 7.4% YOY, nidina tamin'ny fihenan'ny 9.9% YOY ny tahan'ny salan'isa, eny fa na dia teo aza ny fiakarana 1.9-isan-jato isam-ponina. Ny fihenana izay niseho tao amin'ny departemantan'ny F && dia nitondra fidiram-bola 6.5% raha oharina amin'ny tamin'ny taon-dasa.
Ny fidinan'ny tombom-barotra tamin'ity volana ity dia saika vokatry ny fahalemen'ny vola niditra, satria nitazona ny fandaniana ary tamin'ny tranga sasany dia nihena. Nihena ny saran'ny totalin'ny departemanta tsy nozaraina, anisan'izany ny Sales & Marketing (-6.5%), ny information & ny teknolojia (-19.3%) ary ny fananana & fikojakojana (-8.7%), izay nahitana fihenan'ny 11.0% YOY. Ny fandaniana totalin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia nidina 9.7% YOY ho an'ny volana, raha ny karama totalin'ny efitrano iray kosa dia nidina 7.3% YOY.
Na izany aza, tsy azon'ireo mpandraharaha trano fandraisam-bahiny ny fahasahiranana amin'ny fidiram-bola, izay tsy manampy na dia ny famindrana fandaniana aza, ary mitarika fidinana izany.
Ny trano fandraisam-bahiny dia afaka mahazo fampiononana amin'ny marim-bola, izay tafakatra 0.5 isan-jato isan-jato hatramin'ny 41.0%.
Tondro fampisehoana tombony sy fatiantoka - MENA total (amin'ny USD)
KPI Desambra 2019 vs. Desambra2018
RevPAR -7.4% ka hatramin'ny $ 126.70
TRevPAR -6.5% ka hatramin'ny $ 221.99
Payroll -7.3% ka hatramin'ny $ 53.30
GOPPAR -5.4% ka hatramin'ny $ 91.07
Bahrain dia nijoro ho vavolom-panovana herintaona mahery teo amin'ny lafiny roa amin'ny vola miditra sy amin'ny vola lany. Raha nilatsaka 1.4% YOY ny RevPAR ho an'ity volana ity, ary 0.2% kosa ny TRevPAR, 20.6% YOY kosa ny GOPPAR. Ho an'ny taona, nilatsaka 3.2% YOY ny GOPPAR.
Ny tantara tamin'ny volana desambra dia fandaniana. Niakatra ny sarany tamin'ireo departemanta tsy nozaraina, ao anatin'izany ny Fananan-trano & Fikojakojana (tafakatra 27.5%) ary fiakarana 23.2% amin'ny fandaniana amin'ny fampiasana. Niakatra 18.5% YOY ny vidiny ambony rehetra. Mandritra izany fotoana izany dia nidina 3.3% YOY ny vidin'ny mpiasa raha ny tokony ho izy.
Ny tombom-barotra ho an'ny volana dia nidina 4.9 isan-jato isan-jato ho 19% fotsiny.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka - Bahrain (amin'ny USD)
KPI Desambra 2019 vs. Desambra 2018
RevPAR -1.4% ka hatramin'ny $ 89.67
TRevPAR + 0.2% ka hatramin'ny $ 177.87
Payroll -3.3% ka hatramin'ny $ 59.48
GOPPAR -20.6% ka hatramin'ny $ 33.75
Fampisehoana Hotely tamin'ny Desambra tamin'ny Dubai naka tahaka ny faritra MENA lehibe kokoa. Ny emira dia nahavoa ny laharana ambony sy ny ambany, voaporofon'ny fihenan'ny 8.9% YOY ao amin'ny RevPAR, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fihenan'ny 9.8% YOY ny tahan'ny salanisa, na eo aza ny fiakarana 0.7-isan-jato amin'ny isan'ny mponina.
Ny fidiram-bola total dia nihena 8.5% YOY ary 13.6% ho an'ny taona.
Ny fidinan'ny vola miditra amin'ny tombony azo. Ny GOPPAR dia nilatsaka 9.4% YOY (18.6% ho an'ny taona), nidina ambany kokoa tamin'ny fihenan'ny 8.0% YOY amin'ny fandaniana totalin'ny efitrano nipetrahana tsirairay.
Mbola nahagaga kokoa aza ny fidinana raha jerena fa ny fandaniana amin'ny ankapobeny dia nidina ihany koa tamin'ny Desambra. Ny fandaniana totalin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia nidina 8% YOY, raha ny karama isaky ny efitra kosa dia nidina 8.3%. Fitaovana manontolo koa dia nidina hatramin'ny 14.7% YOY.
Ny tombom-barotra dia nidina 0.4 isan-jato isan-jato hatramin'ny 47.3%.
Indikativa fampisehoana tombony sy fatiantoka - Dubai (amin'ny USD)
RevPAR -8.9% ka hatramin'ny $ 189.42
TRevPAR -8.5% ka hatramin'ny $ 318.65
Payroll -8.3% ka hatramin'ny $ 64.43
GOPPAR -9.4% ka hatramin'ny $ 150.61